एनआरएनको एघारौं युरोपेली बैठकबारे युरोप संयोजक बरुवालसँगको कुराकानी
HOME » एनआरएनको एघारौं युरोपेली बैठकबारे युरोप संयोजक बरुवालसँगको कुराकानी
बार्सिलोना । एनआरएनए प्रतिको सोच सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको भेटिन्छ। बेला बखत बिभिन्न टिका टिप्पणीहरु पनि सुनिन्छन्। संघ भित्र दिनानुदिन बिकृतिहरु बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नेहरु पनि छन्। बिशेष गरी विश्व सम्मेलन लगायत बिभिन्न बैठक तथा छलफलमा हुने खर्चलाई अनावश्यक रुपमा ठान्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको पाईन्छ। यता संघ भित्र गुट उपगुट बढ्दै गएकोमा धेरैको चिन्ता पनि छ।
उद्घोष गरेका कामहरु समयमा पुरा गर्न नसक्ने, प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार काम नहुने। बिभिन्न चरणमा सहयोगका लागि आँफैले बोलेको प्रतिबद्धता रकम लामो समय बितिसक्दा पनि बुझाउन नसक्ने लगायत आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरु संघ भित्र बेला बखत उठ्दै आएका छन्। एनआरएनका सम्मेलन तथा बैठकहरु खर्चालु हुने तथा घोषणापत्र अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै बेला बखत आलोचना पनि गरेको छ।
आगामी जुलाई २९ र ३० तारिख लक्जम्बर्गमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एघारौं युरोपेली क्षेत्रीय बैठक तथा नवौं महिला सम्मेलन हुँदैछ। युरोपेली धनी मुलुक लक्जम्बर्गको हिल्टन होटलमा हुने बैठक आखिर के का लागि ? यस अघिका सम्मेलनहरुमा घोषणा भएका प्रतिबद्धताहरु पुरा भए त ? सम्मेलन कत्तिको खर्चालु छ। वास्तवमा एनआरएनका यस्ता महङ्गा र खर्चिला बैठकहरु किन आयोजना गरिन्छन् ?
हरेक वर्ष हुने बैठकले युरोप क्षेत्रमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई लाभदायी छ त ? बैठक वा सम्मलेनका नाममा मानवतस्करी हुने गरेको कतिपयले आरोप पनि छ,यसबारे एनआरएन कत्तिको सजक छ त ? गैर आवासीय नेपाली संघ युरोप क्षेत्रका संयोजक शिबकुमार बरुवालसँगको कुराकानी । बरुवाल ११ औ युरोपेली बैठक मूल आयोजक समितिका संयोजक समेत हुन्।
बेहुली अर्कैलाई बनाउँन खोजपछि युवतीले ब्वाइफ्रेन्डको हत्या गरि मासु पकाइन्
अशोक दर्जीका पूर्व प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने नायिका शिल्पीसँग रोमान्स गर्दै (भिडियो)
तमु समाज युएईले 'तमु ल्होसार कप-२०१८' फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै